जो कुनै पनि पाक sprpavochnike पाउन सकिन्छ भरी टमाटर व्यञ्जनहरु सलाद र जैविक तरकारी भन्दा तयार अलि गाह्रो हो कि धेरै साधारण नाश्ता छन्। कल्पनाले लागि तरकारी, पनीर, माछा, झिंगा ... बस ठाउँ - को भराई लागि, तपाईं कुनै पनि भराई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईं सपना इच्छा छ भने, तपाईंले आफ्नो toppings साथ आउन सक्छन्, र पहिले नै चिरपरिचित व्यञ्जनहरु छन् जो भरी टमाटर, बनाउन सक्छ।
सबैभन्दा लोकप्रिय व्यञ्जनहरु को एक तरकारी संग भरी टमाटर छ। रातो टमाटर भराई लागि सबै भन्दा राम्रो दृढ शरीरमा संग, राउन्ड आकार सही मानिन्छ। टमाटर राम्ररी धोएर र तिनीहरूलाई माथि कटौती गर्दै - टोपी, बाक्लो डेढ सेन्टिमिटर। त्यसपछि चम्मच बिस्तारै पर्खाल हानिकारक बिना मध्य rake।
गाजर, अजवाइन, साग र parsnip: प्याज, हरियो तरकारी र केही मूल तरकारी बनाइएका भराई। मूल तरकारी स्ट्रिप्स मा कटौती, साफ र तेल को रातो-तातो गर्न सेतो तुवाँलो संग पैन मा टस छन्। प्याज पनि साफ छन् चोट र तला। को साग, धोए छन् टुक्रा मा कटौती, तला तरकारी र नुन संग मिश्रित। प्राप्त भराई टमाटर भर्न र Lids संग कवर। भरी टमाटर व्यञ्जनहरु, भिन्न हुन सक्छन् टमाटर सस, भरी खुर्सानी लागि जस्तै तरिकामा तयार छ जो खन्याउन।
स्वस्थ पाकेको टमाटर, प्रयोग टमाटर सस लागि मासु Grinder मार्फत पारित गर्दै छन् जो। परिणामस्वरूप टमाटर ठूलो Boiling ल्याइएको र पाँच मिनेट उसिनेर छ। अब तातो टमाटर ठूलो छाला र बीउ अलग गर्न चलनी मार्फत rubbed गर्नुपर्छ। त्यसपछि परिणामस्वरूप ठूलो नुन, चिनी र मसाले थप्न आवश्यक छ। जनसंचार thickens गर्न, यो एक ड्राई पान तला पीठो मा थपियो। आटा मा गांठ को गठन बच्न एक सानो पानी थप्न।
सबै घटक राम्रो मिश्रित र गरम 15 मिनेट छन्। तयार सस जार भरी टमाटर र तातो पानी संग एक कन्टेनर मा डाल pasteurization भरिएको। आधा-लीटर डिब्बे pasteurized 120 मिनेट - 70 मिनेट, लीटर। pasteurization पछि, बैंकहरू तुरुन्तै अप रोल र सुन्दर सम्म एक कम्बल को आवरण मा राखे।
धेरै परिवारले जाडो भरी टमाटर व्यञ्जनहरु हरेक परिवार आफ्नै बनाउन। तर सबै मायाको छन् केही लोकप्रिय व्यञ्जनहरु लागि, यस्तो जो निम्न सामाग्री समावेश औंलाहरु नुस्खा चाट्नु टमाटर रूपमा entrenched नाम,:
* टमाटर - 2-3 किलोग्राम
* प्याज - 1 टुक्रा
* लसुन - 1 ल्वाड़
* तरकारी तेल -3चमचा
निम्नानुसार marinade तयार थियो: पानी को एक लीटर 9% सिरका, नुन को आधा,3चमचा चीनी, तेजपात, मरिच र मरिच सुगन्धित 50 एमएल लिन आवश्यक छ - 1 चम्मच।
साग कटा र तयार लीटर जार मा राखे। लसुन र भुना वनस्पति तेल को एक चमचा थप्नुहोस्। टमाटर ध्यान बाला एक दांत कोट्याउने सिन्का संग धुन र छेड्नु। क्रममा यो राम्रो marinade र tresnuli.Pomidory राम्रो औसत लिन भिगो गर्न, तर तपाईं ठूलो मिल्यो भने - दुई भागमा कटौती गर्न सकिन्छ। प्याज छल्ले मा कटौती र टमाटर को शीर्ष मा राखिएको।
Marinade, एक फोडा गर्न ल्याउन सिरका थप्न र जार मा तातो खन्याउन आवश्यक छ। 1.5 लिटर - अन-लीटर जार अचार आधा-लीटर, तीन-लीटर आवश्यक छ। बैंक पट को आकार मा निर्भर गर्दछ 12-15 मिनेट pasteurization मा राखे। Pasteurized बैंकहरू अप रोल र ठंडा अघि अप र्याप।
यो नुस्खा मा Marinade सामान्यतया पहिलो स्थानमा पिएको छ भन्ने त स्वादिष्ट छ, र टमाटर पछि खान्छन्।
इटालियन पास्ता -recipe टमाटर संग घर मा तयार गर्न सजिलो, साथै टमाटर संग धेरै अन्य व्यञ्जनहरु छ। सबै ज्ञात र परिचित टमाटर धेरै biologically सक्रिय पदार्थ, मानव शरीर मा लाभकारी प्रभाव समावेश भन्ने तथ्यलाई बिर्सन छैन।
ओवन सबैभन्दा स्वादिष्ट सुखा स्याउ जस्तै?
ओवन मा पाकेका द्वारा पूछे जाने: एक फोटो सहितको नुस्खा
फोटो संग खाना पकाउने मा निर्देशन: बिना अन्डा प्यानकेकहरू लागि नुस्खा
आधा-timbered घरहरू - यो के हो? मोहरा, आधा-timbered घरहरू शैली मा समाप्त र घर को डिजाइन
बहुमूल्य धातु बनेको सिक्का एक लाभदायक लगानी हो
ग्रिल मा कुखुराको पखेटा खाना पकाउने